देउसी भैलो खेलेको भिडियो माछापुच्छ्रे बैंकलाई पठाउनुस्, जित्नुस् ५० हजार रुपैयाँ
२०७७ कार्तिक २८ गते १६:१७ विकासन्युज
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले नेपालीहरुको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको अवसरमा डिजिटल देउसी भैलोको आयोजना गरेको छ । कोरोना भाइरसको जाखिमले गर्दा अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो घरघरमा गएर देउसी भैलो खेल्ने अवस्था नरहेकोले आफुसँग प्रतिभा रहेका...
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले संगम स्वीट्समा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने
२०७७ कार्तिक २८ गते १५:३८ विकासन्युज
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले संगम स्वीट्सबाट सेवा लिँदा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । बैंकले आफ्ना भिषा डेविट कार्डवाहक ग्राहकहरुलाई संगम स्वीट्सको काठमाडौं स्थित आउटलेटहरुबाट सेवा लिदा विशेष छुट प्रदान गर्ने...
सिटिजन्स बैंकको तिहार योजनाः मोबाइल बैकिङ्गबाट पैसा पठाउँदा क्यासब्याक पाइने
२०७७ कार्तिक २८ गते १४:५३ विकासन्युज
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले “यो तिहार, सिटिजन्स डिजिटल कारोवारमा क्यासब्याकको बहार” योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका ग्राहकहरुले मोबाइल बैकिङ्ग मार्फत तिहारमा पैसा पठाउँदा एक सय रुपैयाँ क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् । बैंकका मोबाइल...
सानिमा बैंकको प्रस्तावित लाभांश पारित
२०७७ कार्तिक २८ गते १४:१४ विकासन्युज
काठमाडौं । सानिमा बैंकको प्रस्तावित १३.६० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । आज( कार्तिक २८ गते) शुक्रबार सम्पन्न बैंकको १६औं साधारण सभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । यससँगै सेयरधनीले गत आर्थिक...
दिपावलीमै भारतीय बैंकर्सलाई मालामाल, १५ प्रतिशतले बढ्यो तलब
२०७७ कार्तिक २८ गते १३:०६ विकासन्युज
काठमाडौं । अब भारतीय बैंकर्सहरुको तलब बढ्ने भएको छ । भारतीय बैंक संघ (आईबीए) र बैंक कर्मचारी तथा अफिसर्स युनियनबिच सम्झौता भएसँगै अब बैंकर्सको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको हो । नयाँ सहमति...
सनराइज बैंकको नाफा ३८ करोड, प्रतिसेयर नेटवर्थ १५३.९२ रुपैयाँ
२०७७ कार्तिक २८ गते ११:३२ विकासन्युज
काठमाडौं । सनराइज बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३८ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.७१ प्रतिशतले कम हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोहि...
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोजसम्म) को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको र सोही कारण ऋणीलाई व्याजमा छुटका...
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा ६२ करोड, ब्याज आम्दानी साढे १ अर्ब बढी
२०७७ कार्तिक २८ गते १०:५३ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २६.१२ प्रतिशतले घटी हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको...
एनआईसी एशिया बैंकको खुद नाफा एक अर्ब बढी, निष्क्रिय कर्जा ०.४० प्रतिशतमा सीमित
२०७७ कार्तिक २८ गते १०:३३ विकासन्युज
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी हो ।...
खुद नाफामा एनबी बैंकको छलाङ, गत वर्षको तुलनामा ४२ प्रतिशतले बृद्धि
२०७७ कार्तिक २८ गते १०:०४ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार एनबी बैंकले नाफामा उल्लेख्य बृद्धि गरेको पाइएको छ । एनबी बैंकले...
मेगा बैंकको खुद नाफा र ब्याज आम्दानी दुबैमा वृद्धि, निष्क्रिय कर्जा घट्याे
२०७७ कार्तिक २८ गते १०:०० विकासन्युज
काठमाडौं । मेगा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको पहिलो...
हिमालयन बैंकको खुद नाफा ३६ करोड ५९ लाख
२०७७ कार्तिक २८ गते ९:४५ विकासन्युज
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको खुद नाफा घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद नाफा कम भएको हो । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन...
माछापुच्छ्रे बैंककाे ब्याज आम्दानी साढे ९५ करोड बढी, यस्ता छन् अन्य सूचक
२०७७ कार्तिक २८ गते ९:०६ विकासन्युज
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा ९५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । जुन गत आवको तुलनामा करिब २९ लाख रुपैयाँले बढी हो । बैंकले गत...
बोनसपछि बैंक अफ काठमाण्डूको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
२०७७ कार्तिक २८ गते ८:४२ विकासन्युज
काठमाडौं । शुक्रबार बैंक अफ काठमाण्डूको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । बैंकको १३ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजन पछि बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २६२ रुपैयाँ रहेको छ ।...
गोर्खाज फाइनान्सको नाफा २२२ प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी ३० रुपैयाँ
२०७७ कार्तिक २८ गते ८:३६ विकासन्युज
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्सको नाफा २२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा फाइनान्सले ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्सको...
सनराइज बैंकको नयाँ शाखा र शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा
२०७७ कार्तिक २७ गते १९:१६ विकासन्युज
काठमाडौं । सनराइज बैंकले आफ्नो १३९औं शाखा बाग्लुङ्गमा विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ्ग नगरपालिका वडा नं २ मा शाखा खोलेको हो । साथै, बैंकले बनकटुवा, बैजनाथ गाउँपालिका-७, बाँकेमा ५२...
लाभांश पारित गर्न एनआईसी एशिया बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लाेज कहिले ?
२०७७ कार्तिक २७ गते १८:४१ विकासन्युज
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आगामी मंसीर २१ गते वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । बैंकले सो दिन बिहान ९ बजे काठमाडौंको थापाथलीस्थित बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालयमा आफ्नो २३ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो...
प्रभु बैंककाे क्युआर काेड स्कयान गरी नगद झिक्न सक्ने सेवा संचालन
२०७७ कार्तिक २७ गते १७:०९ विकासन्युज
काठमाडौं । प्रभु बैंकले सम्पूर्ण मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गर्दै क्युआर कोड स्कयान गरी नगद झिक्न मिल्ने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो सेवा अन्य बैंकका मोवाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुले समेत उपभोग गर्न सक्नेछन्...
जिल्ला प्रशासन कार्यलय सुर्खेतमा प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालन
२०७७ कार्तिक २७ गते १६:५८ विकासन्युज
काठमाडौं । प्रभु बैंकले आफ्नाे सेवा विस्तार गर्ने क्रममा सुर्खेत जिल्लाको विरेन्द्रनगर नगरपालिकास्थित वडा नं ०७ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुर्खेतस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा स्थापित एक्स्टेन्सन काउण्टरबाट कार्तिक...
२०७७ कार्तिक २७ गते १५:३१ विकासन्युज
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो १४ औं वार्षिकोत्सव डिजिटल प्रविधि मार्फत शुभकामना आदन प्रदान गरी सम्पन्न गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष सुदिप आर्चायकोे अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सम्पूर्ण सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,...
« अघिल्ला 1 …34567… 319 पछिल्ला »